DUULLAANKII BANII SULAYM, BIXII YAHUUDDA
Rasuulka SCW iyo asxaabtiisa waxa uu go’aankoodu ahaa in ay u beerdhigaan cid walba oo islaamka soo milicsata, waxa ayna ka hor tegi jireen cid walba oo duullaan soo abaabusha damacdana in ay muslimiinta dhib u geysato. Rasuulkuna SCW markuu maqlo qolo soo hub urursanaysa duullaan ayuu qaadi jirey oo meesheeda ayuu ugu tegi jirey. Sidaa darteed Rasuulku SCW markuu ka soo laabtay Badar oo uu joogey 9 cisho ayaa wardoonkii Madiina wuxuu u soo gudbiyey in qabiilka la yiraahdo banii Suleym oo ka mid ahaa reer Qadafaan uu u diyaarinayo ciidankiisii sidii uu duullaan ugu soo qaadi lahaa Madiina. Rasuulku SCW markuu maqlay arrinkaas wuxuu kaxaystay ciidan dhan 200 oo nin oo gaadiidkoodii iyo hubkoodii wata, Madiinana wuxuu madax uga dhigay Cabdullaahi ibnu ummi Maktuum.
Waxay labadaa nin ka sheekeysteen dadkii Badar lagu laayey ceelka lagu gurey, markaas ayaa Safwaan yiri “Ilaah baan ku dhaartaye nolosha iyaga ka dambaysaa nolol maaha”, Cumayr ayaa markaas yiri “run baad sheegtay, Ilaah baan ku dhaartaye haddii aysan jirin deyn la igu leeyahay oo cid iga gudeysaa aysan jirin iyo ciyaal aan rafaad uga baqayo gadaashay, rukuubkayga ayaan fuuli lahaa ilaa aan Maxammed u tago oo dilo, arrin aan ku cudurdaartana waan haystaa oo wiilkaygii ayey qafaasheen”. Safwaan ayaa markaa jeclaystay fikraddaas wuxuuna yiri “deyntaadu waa dusheyda oo anigaa kaa gudaya, ciyaalkaaguna ciyaalkayga ayey la noolaanayaan, inta ay nool yihiinna wanaag ayaan u samaynayaa”. Cumayr wuxuu yiri “qari go’aankeenna”, Safwaanna wuxuu yiri “waa yahay”.
Cumar seeftiisii intuu qaatay oo rakuubkiisi fuulay dhaqaaqay ilaa uu Madiina ka tegey. Ka dib isagoo hashiisii masaajidka agtiisa ku aruminaya ayaa waxaa arkay Cumar binu Khadhaab oo koox muslimiinta ka mid ah la sheekaysanayey, markaasuu yiri “eygaan Cumayr oo cadowga Ilaahay ah wax aan shar ahayn lama imaan”, ka dibna wuxuu cumar u tegey Nabiga SCW oo ku yiri “Nabigii Allow, kani waa cadowgii Ilaahay ee Cumayr oo seeftiisii jeeniqaarsan”. Markaas ayaa Rasuulku SCW yiri “ii soo daaya”. Cumar ayaa u tegey isaga oo seeftiina dharka u saaray, rag muslimiinta ka mid ahna ku yiri “iila geeya Rasuulka SCW oo agtiisa fariisiya, kana digtoonaada aammin ma ahane”. Markii la soo geliyey oo uu Rasuulku SCW arkay Cumar oo wada ayuu yiri “soo daa Cumarow, war Cumery soo dhowow”, markaasuu Cumeyr soo dhawaaday wuxuuna yiri “subax wanaagsan”, Rasuulku SCW wuxuu ugu jawaabay “Ilaahay wuxuu nagu karaameeyey salaan ka kheyr badan salaantaada Cumayrow, waana salaant Ehlu-jannaha”, Ka dib Rasuulku SCW wuxuu yiri “maxaad u timid Cumayr?”, wuxuu yiri “waxaan u imid in aad ii soo deysaan wiilkayga aad soo qafaalateen”. Rasuulku SCW wuxuu yiri “maxay tahay seeftan aad qoorta ku wadato?”, Cumayr wuxuu yiri “Allaah ha hoojiyo seefo, ma wax bay noo tareen”. Rasuulku SCW wuxuu yiri “runta ii sheeg maxaad u timid?”, wuxuu yiri “arrintaas ma ahane wax kale uma imaan”. Markaas ayaa Rasuulku SCW wuxuu yiri “adiga iyo Safwaan baa qol fariistay, waxa aadna ka sheekaysateen dadkii godka lagu guray ee qureysheed, waxaad markaa tiri “haddaan deyn la igu lahay, ciyaalna ii joogin, waan bixi lahaa ila aan Maxammed soo dilo”, Safwaan ayaa markaa dusha saartay deyntaadii iyo ciyaalkaagii si aad aniga ii disho, Allaahna waa kala fogeeyey aniga iyo arrinkaas”. Cumayr wuxuu yiri “waxa aan qirayaa in aad tahay Rasuulkii Allaah, waxaannuna ahayn Rasuulkii Allow kuwo kugu beeniya in khabar samada kaaga yimaado, waxyina kugu soo dego, arrintaanna cid kale nalama ogeyn aniga iyo Safwaan, Ilaah baan ku dhaartaye waxa aan ogaadey Allaah ma ahne cid kale in aysan warkaan kuu keenin, Alle ayaa mahad leh Allihii islaamka igu hanuuniyey, socodkaanna ii soo waday”, dabadeedna tawxiidkii ayuu qiray. Markaas ayaa Rasuulku SCW ku yiri asxaabtii “fahamsiiya walaalkiin diintiisa qur’aankana u akhriya, maxbuuskiisana u sii daaya”.
Ninkii Safwaan ahaa, oo Cumayr ay ballanta isku ogaayeen, wuxuu reer Makka ku dhihi jiray intuu Cumayr maqnaa “ku bishaaraysta dhacdo imaan doonta dhowaan oo idin hilmaansiin doonta dhacdadii Badar”. Wuxuuna dadka socotada ah ee Madiina ka yimaada weydiin jirey Cumayr iyo xaaladdiisa ilaa markii dambe loo soo sheegay in Cumayr islaamay. Safwaan wuxuu markaas ku dhaartay in uusan Cumayr dib dambe ula hadlin, waxna tarin. Ka dib wuxuu Cumayr Makka ku soo laabtay, isagoo soo islaamay, wiilkiisiina loo soo daayey, wuxuuna Makka ka bilaabay dacwo uu dadka islaamka ugu yeerayo, dad badan ayaana gacantiisa ku islaamay.
Sida aan soo marnayba Rasuulku SCW markii uu Madiina u soo hijrooday wuxuu heshiis la saxiixday saddexdii qabiilo ee yahuudda ahaa ee la kala oran jirey: Banii Qaynuqaac, Banii Nadiir iyo Banii qureyda. Heshiiskaa waxaa ka mid ahaa in Madiina nabad loogu wada noolaado oo aan la isku xadgudbin. Sidaa darteed Rasuulka SCW iyo asxaabtiisa oo caan ku ahaa in aysan ballanta ka bixin, haddiise looga baxo ka ficilo qaata, waxa ay siduu ahaa u ilaaliyeen heshiiska, laakiin yahuudda oo weligeedba lagu yaqaannay ballan darro, khiyaamo iyo dhagar, kama aysan suulin sifadoodaas, waxayna intaas muslimiinta u maleegayeen shirqoo iyo dhagar, iyagoo weliba dacaayado ka fidinaya muslimiinta, tashwiishna ku furayey. Waxaana dhagartoodii ka mid ahaa: nin la oran jirey Shaas binu Qays, oo ahaa odey yahuudi ah, ayaa soo maray koox ansaar ah oo meel wada fadhida, markaas ayuu ka carooday wanaagga iyo jacaylka uu islaamku dhexdooda dhigay labadii qabiil (Aws iyo Khasraj) oo muddo dheer cadaawad iyo dagaal ka dhexayn jirey, markaas (ayuu) yiri “jamac baa ku kulmay magaaladaan, Ilaah baan ku dhaartaye la joog nooma ahaanin haddii ay arrin ku kulmaan”, wuxuu markaas la hadlay wiil yar oo yahuudi ahaa oo la socday kuna yiri “u tag nimankaas oo la fariiso, waxaadna xusuusisaa maalintii Bucaath iyo wixii ka horreeyey, una tiri gabayadii ay isu tirin jireen”. Wiilkii meeshii ayuu tegey sidii ayuuna sameeyey. Markaas ayaa raggii meesha joogey sheydaan simbiririxeyey, waxaana qaadday ficiladii qabiilka ilaa ay arrintii ka hadleen oo ka doodeen, isuguna faanee, ayna isu istaageen laba nin oo labada qabiil kala ahaa oo midkood kii kale ku yiri “haddii aad doontaan iyadii (Bucaath) ayaan soo celineynaa”. Dabadeedna labadii kooxoodba way caroodeen, waxayna dheheen “ballan aanu samaysanno”. Ka dibna waala isku hub doontay.
Arrintii ayaa gaadhay Rasuulka SCW, markaas ayuu si degdeg ah u soo baxay isaga oo ay la socdaan koox asxaabtiisa ka mid ah, markuu u yimid raggii isku hub doontay ayuu ku yiri “muslimiiney Allaah, (Allaah), war ma habarwacashadii jaahiligaad (ku dhaqaaqdeen) aniga oo idin dhex jooga, ka dib markuu Allaah idin hanuuniyey oo idin sharfay, idinkana gooyey arrintii jaahiliga, oo idinka koriyey gaalnimo, quluubtiinnana isku soo dumay”. Markaas ayey raggii ogaadeen in uu sheydaan simbiririxiyey oo ay arrintaanu ahayd makrigii (dhagartii) cadowgooda. Ka dibna way ooyeen, waana is mucaanaqeeyeen (marxabeeyeen). Dabadeedna Rasuulka SCW ayey soo raaceen iyagoo Ilaahay ka badbaadiyey fitnadii sheydaankii Shaas binu Qays, oo ka mid ahayd khiddadihii ay yahuuddu muslimiinta la rabeen.
((WAXAY DHEHEEN KOOX EHELU KITAABKA KA MID AH “RUMEEYA KII LAGU SOO DAJIYEY KUWA (XAQA) RUMEEYEY (QURAANKA) MAALINKA GALINKIISA HORE KUNA KUFRIYA AAKHIRKIISA, WAXAY MUDDAN YIHIIN (HADAAD SAAS SAMAYSAAN) INAY KA NOQDAAN (ISLAAMKEE) (AMA GAALOOBAAN)”. (Suuratu Aali-Cimraan 72).
Sidoo kale waxa ay samayn jireen in ay maciishadda ku ciriirshaan qofka islaamka qaata, oo haddii ay deyn ku leeyihiin way ku dhibi jireen, haddii uu deyn uga baahdana way u diidi jireen, haddii uu deyn ku leeyahayna way u diidi jireen, waxayna ku dhihi jireen “waxaa deyntaada guditaankeedu na saarnaa intii aad diintaadii ku jirtey, haddii aad mar iilatay waxba naguma lihid”.
Rasuulku SCW, markii uu arkay xadgudubka iyo qooqa ay yahuuddu waddo siiba reer banuu Qaynuqaac, ayuu yahuuddii oo dhan ku kulmiyey suuqii reer banuu Qaynuqaac oo ku yiri “yahuudeey islaama inta uusan idinku dhicin waxa ku dhacay qureysh”, markaas ayey dheheen “Maxammedow yeysan naftaadu kugu kedinin diliddii aad dishay odeyaashii qureysheed oo ahaa duqow aan dagaalka aqoonin, haddaad annaga nala dagaashana waxa aad ogaanaysaa in aan rag nahay, annaga oo kalena aadan hore ula kulmin”. Allaah isagoo arrintaa tilmaamaya wuxuu yiri:
Ka dib isagoo Rasuulku SCW doonaya in uu reerkaas abaalkooda marsiiyo, ayaa waxaa istaagay Cabdullaahi ibnu Ubay ibnu Salool, oo munaafaqii aan ka soo hadalnay ahaa, wuxuuna Rasuulka SCW ku ilxaaxiyey in uu nimankaas iska daayo, wuxuuna yiri “Maxammed hagaaji gargaarayaasheda” waayo qabiilkiisa Khasraj iyo binu Qaynuqaac ayaa xulufo ahaa jirey islaamka ka hor. Rasuulku SCW wuu ka jeedsaday hase yeeshee Cabdullaahi arrintii wuu ku soo celceliyey, wuxuuna gacanta geliyey canbuur bireedka Rasuula SCW jeebkiisa. Rasuulku SCW intuu aad u carooday oo wejigiisii madoobaaday ayuu yiri “i sii daa, war hooggaagee i sii daa” hase ahaatee munaafaqaasi waa diidey oo arrintiisii buu ku adkaystay isagoo oranaya “ma jirto Ilaah baan ku dhaartaye ku sii dayn maayo ilaa aad wanaajisid xulafadeyda, Afar boqol oo seefle iyo Sadex boqol oo canbuur biredle ah oo weligood iga difaaci jiray guduud iyo madow (carab iyo cajam), miyaad maanta hal mar layneysaa. Ilaah baan ku dhaartaye waxa aan ka baqayaa halaag”. Ka dib Rasuulku SCW wuu u sii daayey laakiin wuxuu amray in ay Madiina ka guuraan. Markaas waxa ay u guureen dhinaca Shaam in kasta oo qaar kamid ahaa ay khaybar u guureen, maalkoodiina waxa la wareegay muslimiinta. Qaniimadii waxaa madax looga dhigay Maxammed binu Maslama.